Showing posts with label ဆောင်းပါးများ. Show all posts
တင်ပါးကပျော့တွဲပြီး အပျိုစစ်မှ တင်ပါးလေးက တင်းနေတာ နိပ်ကြည့်ရန်
ဇေယျာသူရ3:10:00 AM တင်ပါးကပျော့တွဲပြီး အပျိုစစ်မှ တင်ပါးလေးက တင်းနေတာ ၁၆နှစ် အပျို ဖြစ်စ တုန်းက အပျို မစစ်ပဲနဲ့ ကေ...Read More
ဇေယျာသူရ5:09:00 AM ၀ုန်း... ကျွန်တော့် အခန်းတံခါးကို ဆောင့်ကန် ဖွင့်လိုက်သော အသံကြောင့် ကျွန်တော်ရော ကျွန်တော့် ချစ...Read More
ကောင်မလေးကို ဒီလိုတွေ သွားမလုပ်လိုက်ပါနဲ့..
ဇေယျာသူရ6:15:00 AM ချစ်သူရည်းစားဘဝဆိုတာ ရင်ခုန်ကြည်နူးဖွယ် အငွေ့အသက်၊ တိမ်းညွှတ်မက်မောဖွယ် အထိအတွေ့၊ လွမ်းဆွတ်တမ်းတဖ...Read More
on 6:15:00 AM
မုဆိုးမတို့ တစ်ခုလပ်တို့ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ?
ဇေယျာသူရ6:00:00 AM "မုဆိုးမတို့ တစ်ခုလပ်တို့ဆိုတာ" (စာသားသိပ်ကောင်းလို့ ဖတ်ကြည့်ပါ) ---------- မုဆိုးမတို...Read More
မိန်းကလေးများ လုံးဝလုံးဝ သတိထားကြဖို့ Share ပေးပါ။ (တကယ့်အဖြစ်အပျက်လေးပါ) ဇေယျာသူရ8:03:00 PM ဒီအဖြစ်အပျက်လေးကတကယ့်အဖြစ်အပျက်လေးပါ. သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးသင်ခန်းစာယူသင့်တယ်ထင်လို့ မျှဝေပေးတာပါ...Read More
မိန်းကလေးများ လုံးဝလုံးဝ သတိထားကြဖို့ Share ပေးပါ။ (တကယ့်အဖြစ်အပျက်လေးပါ) Reviewed by ဇေယျာသူရ
ဇနီးမယားတယောက်ဆိုတာ.. ဘယ်လိုမျိုးလည်း နိပ်ကြည့်
ဇေယျာသူရ7:10:00 PM ကြည့်ရန်နှိပ်ပါ။ ဇနီးတစ်ယောက်ရဲ့တန်ဖိုး ရုပ်အဆင်းအဂါင်္လှပတဲ့ ဇနီးတစ်ယောက်ဟာ အပေါင်းအသင်းတွေကြား အ...Read More
ညက များသွားခဲ့ရင် (နှိပ်ကြည့်လိုက်နော်) ဇေယျာသူရ2:57:00 AM တစ်ခါတလေမှာ ဂျုးတို့မိန်းကလေးတွေ သူငယ်ချင်းမွေးနေ့တို့ Gathering Party တို့သွားရင်း မသောက်တတ်သော...Read More
ညက များသွားခဲ့ရင် (နှိပ်ကြည့်လိုက်နော်) Reviewed by ဇေယျာသူရ
on 2:57:00 AM
ဖူးစငုံစ ပန်းလေးများ အခူးခံရလျှင် ( ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် အိမ်ထောင်ပြုလျှင်)
ဇေယျာသူရ10:23:00 PM အိမ်ထောင်ရေးဆိုတာ လောကကြီးအတွက် အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေပေမယ့် ယနေ့ခေတ်လူငယ်များဟာ ဆယ်ကျော...Read More
အ၀ှါပြုနေတဲ့အချိန် ဒါတွေ မလုပ်မိကြပါစေနဲ့..။ (နှိပ်ကြည့်ထားလိုက်နော်) ဇေယျာသူရ10:19:00 PM အပျိုဖော်ဝင်စ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကနေစပြီးတော့ အသက်၎ဝကျော်တဲ့အထိ တစ်လတစ်ခါရာသီလာတယ်ဆိုတာက အမျိုးသမီးေ...Read More
အ၀ှါပြုနေတဲ့အချိန် ဒါတွေ မလုပ်မိကြပါစေနဲ့..။ (နှိပ်ကြည့်ထားလိုက်နော်) Reviewed by ဇေယျာသူရ
ယောင်္ကျားစစ်စစ်တွေတိုင်း မြင်ရုံနဲ့ ရင်မခုန်ပဲမနေနိုင်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေ့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်က နေရာ (၅)ခု ဇေယျာသူရ9:59:00 PM မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ တစ်ကိုယ်လုံးကို မိမွေးတိုင်းဖမွေးတိုင်း မြင်ရတွေ့ရရင် သဘောကျပါလား။ ဒါပေမယ့...Read More
ယောင်္ကျားစစ်စစ်တွေတိုင်း မြင်ရုံနဲ့ ရင်မခုန်ပဲမနေနိုင်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေ့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်က နေရာ (၅)ခု Reviewed by ဇေယျာသူရ
အပျိုစစ်မစစ်သိနိုင်တဲ့ အချက်များ ( တကယ်သိချင်သူများသာဖတ်ရန်) ၁၈+ဖြစ်သည် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှဖတ်ရန်။
ဇေယျာသူရ8:07:00 PM အပျိုစစ်မစစ်သိနိုင်တဲ့ အချက်များ ( တကယ်သိချင်သူများသာဖတ်ရန်) ၁၈+ဖြစ်သည် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှဖတ်ရန်။ ၁၈...Read More
ရေကျော်ပွဲဈေးတန်းက ဘိုးတော်ကို လှောင်ပြောင်လိုက်မိတဲ့ လူငယ်တစ်စု အကြောက်ကြီး ကြောက်သွားပြီး မနည်းတောင်ပန်ကြရ..။ . အပြည့်အစုံဖတ်ရန် နှိပ်ပါ။
ဇေယျာသူရ5:27:00 AM ရေကျော်ပွဲဈေးတန်းက ဘိုးတော်ကို လှောင်ပြောင်လိုက်မိတဲ့ လူငယ်တစ်စု အကြောက်ကြီး ကြောက်သွားပြီး မနည...Read More
on 5:27:00 AM
လင်မယားအတူနေ ဆက်ဆံခြင်းနှင့် အန္တရာယ် ၆ ခု အရေးကြီးလို့ အရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့ ကျားမတိုင်း သိထားသင့်ပါသည်။ . အပြည့်အစုံကြည့်ရန် နှိပ်ပါ။ Share ပေးပါ။ ဇေယျာသူရ1:27:00 AM လင်မယားအတူနေ ဆက်ဆံခြင်းနှင့် အန္တရာယ် ၆ ခု အရေးကြီးလို့ အရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့ ကျားမတိုင်း သိထားသင့်ပ...Read More
လင်မယားအတူနေ ဆက်ဆံခြင်းနှင့် အန္တရာယ် ၆ ခု အရေးကြီးလို့ အရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့ ကျားမတိုင်း သိထားသင့်ပါသည်။ . အပြည့်အစုံကြည့်ရန် နှိပ်ပါ။ Share ပေးပါ။ Reviewed by ဇေယျာသူရ
လမ်းမပေါ်ကအလေအလွင့်ဆေးသမားတ ယောက်ရဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိ
ဇေယျာသူရ9:49:00 AM #Leonardo ( တသက်တာအကောင်းဆုံးသ ရုပ်ဆောင်၁၀၀ထဲကအသက်အငယ်ဆုံးမင်းသား (သို့) လမ်းမပေါ်ကအလေအလွင့်ဆေးသမ...Read More
ချာလီချာပလင် နှင့် mr.bean ဘင်း သူတို့ရဲ့ ဘဝအမှန် နိပ်ကြည့်ရန်
ဇေယျာသူရ9:37:00 AM #Rowan_Atkinson ( ၂၁ရာစုကမ္ဘာ့အတော် ဆုံးဟာသပညာရှင် (သို့) လူအများရယ်စေတဲ့လူ ပေါတစ်ယောက်ရဲ့နောက်က...Read More
လူများ အညာ အလိမ်မခံမိစေ ပါနဲ့.?
PannKyar7:20:00 AM လူများ အညာ အလိမ်မခံမိစေ ပါနဲ့.? မြန်မာပြည် က ကုမ္မဏီ အတော် များရှိသည် မြန်မာပြည်က ပညာ ရေး အားနည်း မူ့ကြောင်း အသိ ပညာ နောက်နှေး မူ့ကြောင့် သ...Read More
Reviewed by PannKyar
ယောက်ျားပီသတဲ့သူ တစ်ယောက်မှာ ရှိသင့်တဲ့ အရည်အချင်းများ
PannKyar3:51:00 AM မိန်းမတစ်ယောက်မှာ မိန်းမပီသတဲ့ အရည်အချင်းရှိဖို့လိုသလို ယောက်ျားတစ်ယောက်မှာလည်း ယောက်ျားဆန်ပြီး စိတ...Read More